१० स्थानमा कोरोना भाइरसको परीक्षण सुरु
१० स्थानमा कोरोना भाइरसको परीक्षण सुरु देशैभरका क्वारेन्टाइनमा ९ हजार १६८
काठमाडौं । सातै प्रदेशका १० स्थानमा कोरोना भाइरसको परीक्षण सुरु भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिएका हुन् ।
आइतबारबाट धुलीखेल अस्पताल, भरतपुर अस्पताल र भैरहवा अस्पतालमा सुरु भएसँगै हाल १० स्थानमा कोरोना परीक्षण सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सातै प्रदेशका अस्पतालमा सोमबार १०७ जना आइसोलेसनमा उपचार गरिरहेका उनले जानकारी दिए । “काठमाडौ उपत्यकामा १२ जना र उपत्यका बाहिर ९५ जना आइसोलेसनमा भर्ना भएका छन्,” उनले भने, “सोमबारसम्म देशैभर ९ हजार १ सय ६८ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् ।”
२४ घण्टामा मन्त्रालयको कलसेन्टर १११५ र ११३३ मा ३ हजार दुई सय १२ कलको सम्बोधन गरिएको प्रवक्ता डा. देवकोटाले बताए । “कन्ट्याक ट्रेसिङ आठै जनाको सम्पर्कमा रहेका मानिसहरूको सबैको गरिरहेको छौ”, उनले भने, “गत २४ घण्टामा मन्त्रालयको मोबाइल एपमा आफ्नो लक्षण राख्ने मानिसमा कोरोनाको रेड जोनमा ५ जना परेका छन् ।”
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हालसम्म कोरोना भाइरसको आशंकामा एक हजार ६ सय ९७ जनाको परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चैत महिनाभित्र विदेशबाट आएको काठमाडौ उपत्यकाभित्र रहेका मानिसको नमुना संकलन गर्न इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको नेतृत्वमा नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी र मेयरले खोज्ने निर्णय भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।